Indlu epholileyo kwidolophu yase-Hudson yembali !! - I-Airbnb
Indlu epholileyo kwidolophu yase-Hudson yembali !!
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMatthew
Wamkelekile kwikhaya lam lokurenta kwiholide e-Hudson entle, e-WI. Eli khaya lihamba umgama ukuya kuMlambo iSt. Croix, iLake Mallalieu, kunye neevenkile ezimangalisayo kunye neendawo zokutyela kumbindi wedolophu yaseHudson. Eli khaya lipholileyo lalungiswa ngokutsha ngokukodwa ukuba libe ngabahambi. Kwenziwe zonke iinzame zokubonelela ngezinto eziluncedo abantu abazifunayo ngelixa bekude nekhaya. Le cottage ngokuqinisekileyo iya kuba likhaya kude nekhaya!
Eli likhaya elinye lokulala, ibhedi yesibini yibhedi yase-Murphy elingana nobukhulu obusegumbini lokuhlala.
Iibhedi ezimbini ezitofotofo ezilingana nokumkanikazi, i-wifi kuyo yonke indlu, iofisi yeshishini eligcweleyo, ikhitshi eligcweleyo elinekofu entsha, umabonwakude omkhulu onenkcazo ephezulu enokufikelela kwiNetflix, kwiAmazon Prime, Showtime, Disney Plus nokunye! Le ndlu ikwanendawo yokucima amalahle yangaphandle, indawo yomlilo, indawo yokuhlamba impahla esetyenziselwa iindwendwe, kunye negaraji xa uyicelile.
4.99 · Izimvo eziyi-162
Le yindawo entle yosapho enobuhlobo. Ebusuku kuthe cwaka kwaye emini lixabiso elifanelekileyo nje elidlamkileyo. Kukho izikolo zamabanga aphantsi ngaphakathi kweebhloko ezimbalwa zale propathi kunye namakhaya aliqela anembali ecaleni kwesitalato i-3rd.
Ndihlala ndinikezela ngenombolo yam yefowuni kwiindwendwe kwaye ndizenze ndifumaneke kangangoko. Ndindwendwela u-Airbnb kuba ndonwabela ngokwenene ukudibana nabantu abatsha. Ndivela e-Hudson ndonwabile ukubonelela ngeengcebiso kuyo nayiphi na into e-St. Croix River Valley, konke okufuneka ukwenze kukubuza!
Ndihlala ndinikezela ngenombolo yam yefowuni kwiindwendwe kwaye ndizenze ndifumaneke kangangoko. Ndindwendwela u-Airbnb kuba ndonwabela ngokwenene ukudibana nabantu abatsha. Ndivel…